Home Wararka Maxaa isku soo beegay safarka Biixi ee USA & Wadaadka Hargeysa u...
Maxaa isku soo beegay safarka Biixi ee USA & Wadaadka Hargeysa u soo dirtay Shabaab?
Iyadoo Washington uu safar ku joogo Muuse Biixi oo gadaya fekerka ah in Mareykanka & Somaliland iska kaashadaan amniga aya Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame (Aadan Sunne) oo dhowaan magaalada Hargeysa ka baxsaday ayaa sheegay inuu naftiisa kala badbaaday maamulka Somaliland, isla markaana uu ku biiray Alshabaab.
Baxsadka la sheegay ee Adan Sunni aya la aaminsan yahay in Somaliland ay ka shaqeyneyso in loo sameeyo hoggaan cusub kooxda Shabab oo uu ka dhex jiro is qabqabsi dhinaca hoggaanka ah tan & markii la dilay Axmed Godane oo ka soo jeeda Somaliland.
Shabab oo aan ka fulin qaraxyo iyo dilalka qorsheysan sida ay uga fuliyaan magaaloyinka Muqdisho, Nairobi & Kamplala taasoo dhalisay shakiga laga qabo sida maamulka Somaliland uu ugu lug leeyahay kooxda Shabab.
Sheekhan Argagixada ah ayaa sheegay inuu dhex mushaaxayo Wilaayaadka Islaamiga ee 11-ka ah oo ay maamulaan Xarakada Alshabaab, sida uu yiri, wuxuuna caddeeyay inuu si rasmi ah ugu biiray Alshabaab, markii uu naftiisa kala baxsaday maamulka Somaliland.
“Magaalada Hargeysa waxaan uga soo baxay aniga oo reerkeygii wata in waddankii aan ku dhashay oo aan ka ahaa nin culimo ah oo ku howlan dacwada Islaamka iyo tarbiyada Islaamka ay igu timid carqalad xooggan oo ku wajahan howlsheyda, taasoo kaga timid nidaamka ka jira meesha,” ayuu yiri Sheekha.
Sheekhan oo caan ka ahaa Somaliland, marar badanna lagu xiray magaalada Hargeysa ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay Alshabaab badbaado u doonteen, isaguna uu ku biirin doono wixii cilmi iyo awood ah ee uu hayo, wuxuuse beeniyay inuu xil u doontay.
Sheekh Aadan Sunne oo wareysi siiyey BBC-da ayaa si weyn ugu faraxsanaa inuu ka mid noqday Alshabaab, wuxuuna ka gaabsaday inuu ka hadlo sida uu uga baxsaday magaalada Hargeysa.
Previous articleFaallo: UAE Ma Jidkii hore ayey Mari Doontaa Misa Waxbey ka Baran Doontaa?
Next article14 sano ka dib markii AMISOM dalka timid, ayaa wali lahaynin ciidan la wareega amniga dalka
Isimada Puntland oo go’aamiyay in ilmo Diyaano loo daayo hay’adda PSF,...